लालहिरा प्याखंको खोजी | कथा | नेशन श्रेष्ठ र पुष्पा पलाञ्चोके | दशैं साहित्य विशेष
एकसमय थियो जब र्कीतिपुरको शहरलाई नै पृष्ठभूमि बनाएर मौलिक लाल र हिराको प्रेम र संघर्षको कथा लालहिरा प्याखं प्रस्तुत हुन्थ्यो । तर, अहिले यो कथाको एक भाग देवी प्याखं मात्र बचेको छ ।
कौला, नेपाल संवत् अन्तर्गत बाह्रौं महीना । यतिखेर खुला नीलो आकाशमा सेतो बादल छाउँदै गर्दा खेतमा सुनौला धानका बाला लहलाउन थाल्छन्, नेवार समुदायको घर आँगनमा गुग्गलको सुवास मगमगाउँछ अनि विभिन्न पाटीहरूमा घन्किरहेको मालश्री धुन सुन्न पाइन्छ ।
अधिराज्य भर दशैं मनाइरहँदा, नेवाः समुदायले कौलाको बेला मोहनी नखः मनाउँछन् । यसका लागि विधिवत् आगममा जमरा राखिन्छ र अजिमाहरूको पूजा गरिन्छ । नौरथामा उम्रिएका पहेंलो जमरासँगै कुछी भ्वे, स्याक्वत्याक्व अनि चालं गरिकन मोहनी पर्व मनाइन्छ ।
मोहनी नखः विशेष गरी प्रकृतिसँग जोडिएको संस्कृति हो । यसैले जीवन प्रदान गरेको हो मोहनीको संस्कृतिलाई । किसानको लागि शक्ति भनेकै अन्न अनि यससँग सम्बद्ध सीप र औजारहरू हुन् । मोहनीको बेलामा यिनै वस्तुको उपासना हुन्छ ।
उपासनाका लागि अजिमाहरूको पूजा अर्चना गरिन्छ । अजिमामा पुरातन सीप अनि संस्कृतिको रहस्य रहने विश्वास रहेका कारण, समुदायले उक्त उपासनामार्फत वर्तमानको लागि परिश्रम अनि भविष्यको लागि आशा अनि भरोसा हासिल गर्दै आइरहेको हुन्छ ।
अजिमाहरूको गणमा कोही शान्त, कोही रौद्र, कोही सुन्दर अनि कोही क्रूर छन्; जीवनको समग्र भाव भंगिमा मातृका गणमा समाहित भएर बसेको देखिन्छ । नेवाः संस्कृतिमा अजिमाहरू हृदय स्पन्दनका रूपमा रहेका छन्; सुरक्षादेखि साधनामा, जीवनका हरेक क्रियाकलापमा अजिमाहरूको आशीर्वाद आवश्यक मानिन्छ ।
मोहनीभरि सबैतिरका पीठमा समुदाय भावना सक्रिय हुन्छ ।
रीतिथिति अनि विधि व्यवहारका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । उदाहरण स्वरुप कीर्तिपुरको नेवाः समुदायले अभ्यास गर्ने विविध क्रियाकलापलाई लिन सकिन्छ ।
कीर्तिपुरमा इन्द्रायणी देवीको विशेष महत्व छ । बाघ भैरव र इन्द्रायणी देवी कीर्तिपुरवासीका उपास्य हुन् । मोहनी नखः यिनै शक्तिका स्रोतका वरपर घुम्ने गर्दछ नगरका गल्ली गल्ली ।
एक महीना अगाडि नै यँला बेलादेखि कीर्तिपुर नगरवासी पीठहरूको दर्शनमा सक्रिय हुन्छन् । यस बेला वाद्यवादनका साथ भक्तिपूर्वक रातको समयमा नगरका सारा पीठहरूको दर्शन गरेर बत्ती दिने गरिन्छ, जसलाई पीठ सिइक वनिगु भनिन्छ । मोहनी नखः यसको निरन्तरता बनेर आइपुग्छ अनि यसको पूर्णता विशेष लोकनृत्यमा गएर हुन्छ ।
प्रत्येक नेवाः घर अगाडिको पिखालखुले उक्त घरलाई समाजसँग जोडे जस्तै मोहनीमा आगम भित्रका अनुष्ठानले व्यक्तिलाई र समस्त परिवारलाई आफ्नो पुर्खासँग, आफ्नो मूल स्रोतसँग जोडेको हुन्छ ।
नेपालमा प्रचलित विविध तन्त्र परम्परामा मातृका गणको परिकल्पना मण्डलमा नृत्य गरिरहेका देवीहरूका रूपमा गरिएको छ । मातृकागणहरूमा सुरक्षाको लागि प्रार्थना गर्ने चलन छ ।
देवी महात्म्यमा शुम्भ निशुम्भ वधका लागि भगवती महासरस्वतीले युद्धमा सरिक भएका विविध मातृ देवीहरूलाई आफूमा विलय गराएको प्रसंग छ । यता इन्द्र, रुद्र, विष्णु, कुमार आदि देवतामा पनि शक्ति र सामथ्र्यका रूपमा आफू नै अभिव्यक्त भएको भनेर देवीले आफ्नो वास्तविकता बताएकी छिन् ।
यो पौराणिक रुपक नेवाः समुदायमा आउँदा संस्कृति बनेर जीवन्त हुन्छ, स्थानीय स्वाद मिसिन्छ, आस्था अनि विश्वास भरिन्छ । उदाहरण कीर्तिपुरको चर्चित बाह्रवर्षे गथु प्याखंलाई नै लिन सकिन्छ । विधिवत् उत्पन्न मातृका गण आफ्नो निश्चित दायित्व पूरा गरेर सांस्कृतिक रूपमा समाहित भएर जान्छन् । त्यस बाहेक वर्षेनि मोहनीका बेला चालंको दिनमा नगर परिक्रमामा निस्कने देवी प्याखंको आफ्नै महत्व छ ।
तःननि दाफा खलः कीर्तिपुरको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा हो । तेह्रौं शताब्दीमा जन्मिएको दाफा परम्परा यस खलःको विशेषता हो । देवी प्याखं उक्त दाफा खलःमा संरक्षित छ ।
लगभग दुई सय वर्ष पुगिसकेको यस प्याखंमा इन्द्रायनी, ब्रह्मायनी, भैरव, कवं, ख्याः गरिकन पाँच देवगण रहन्छन् । कुम्कुम वर्णको इन्द्रायनी, नीलो वर्णको भैरव अनि पहेंलो वर्णको ब्रह्मायनी; यी मूल देवताहरू आफ्ना गण कवं र ख्याःका साथ नगरका निर्धारित स्थानमा नृत्य गर्दै अगाडि बढ्छन् ।
नगर परिक्रमाको तयारी कौलाथ्व प्रतिपदाको दिनदेखि नै हुने गर्छ । यस दिन आखः छेंमा दाफा गुरुहरूको उपस्थितिमा जमरा राखिन्छ र अष्टमीको दिन विशेष दाफा आरती गीत गाई शक्ति स्थापना अर्थात् थापं गरिन्छ । अष्टमीको दिन सम्पूर्ण बाजाहरूलगायत पौराणिक ख्वाःपाःहरूको पूजाआजा गरिन्छ । नवमीको दिन आआफ्नो घरघरबाट पूजा लगी आखः छेंमा राखिन्छ र भोलिपल्ट दशमीको दिन त्यहीं भेला भई पूजाआजा गरिन्छ नगर परिक्रमामा निस्कनु अघि ।
देवी प्याखंका पात्रहरू दाफा खलःकै सदस्यहरू हुन्छन् । नृत्य गर्नेहरूलाई विधिवत् रूपमा आफ्नो वस्त्र र ख्वाःपाः धारण गर्न लगाइन्छ । बाजा बजाउनेहरूले आ–आफ्नो बाजा पूजा गरी एक चरण नासःद्यःको अर्चना गर्छन् ।
यसरी तःननिको आखः छेंदेखि देवी प्याखंले आफ्नो यात्रा तय गर्छ । मूल पात्र इन्द्रायनी, ब्रह्मायनी अनि भैरव ख्वाःपाः (मुख), वसजाः (वस्त्र) र तिसाः (गहना) मा सजिएर हातमा आफ्ना ज्वसाः (अस्त्र) बोकी कवं र ख्याःका साथ दाफा संगीत सहित पुरानो कीर्तिपुरको परिक्रमा गर्छन् ।
कीर्तिपुरका ऐतिहासिक तथा धार्मिक ठाउँहरू भरिया पुखुःको गणेश, चिलन्चो महाविहार, बाघ भैरव, सतःक्व, समला ढोका, देव ढोका र सिंह दबुमा बिसाउँदै प्याखं र दाफा टोलीले स्थानीयबाट विधिवत् पूजा थाप्छन् । साथसाथै ती ठाउँहरूमा रहेका पीठहरूप्रति समर्पित भावले द्यः ल्हाएगु लगायत अन्य वन्दनाहरू गाउँछन् ।
बाघ भैरव मन्दिरस्थित नृत्यनाथ नासः द्यको पीठ अगाडि विशेष पूजाअर्चना गरिन्छ । नित्यनाथ ग्वाराको मे र तालमा देवी प्याखंका गणको नृत्य चल्छ यहाँ । परिक्रमाको क्रममै प्रसादको रूपमा मोहनी नखःको प्रमुख परिकार समए बजि बाँडिन्छ । मोहनी भर आगममा गोप्य तवरले उपासना गरिएको शक्ति, विविध बाजाको तालमा दाफा गायन सँगसँगै नाच्दैनाच्दै घरआँगन अगाडि आइपुग्छ र अन्ततः तःननि टोलमा आइपुगी अन्य मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिका साथ समापन गरिन्छ । त्यसपछिको पूर्णिमासम्मको दिनहरूमा कतैबाट प्याखं प्रस्तुति र देवगण दर्शन गर्नका निमित्त बोलाइएमा दाफा खलः सहर्ष जाने र पूजा थाप्ने चलन पनि छ ।
दशैंका विशेष अष्टमी, नवमी, दशमीका दिन गरिने बलिका लागि तयारी गरिरहँदा तःननि भने सांगीतिक र सांस्कृतिक भएर नृत्य मुद्रामा इन्द्रायनी देवगणको उपासनामा तत्पर हुन्छ । देवी प्याखंलाई दाफा खलः लगायत सम्पूर्ण समुदायले नै प्रेमको प्रतीकका रूपमा लिने गरेका छन् । मोहनी नखः सांगीतिक परिवेशमा देवी प्याखंका रूपमा उत्कर्षमा पुग्ने गर्छ ।
अघिल्लो पुस्ताको ज्ञान र अनुभवलाई पछिल्लो पुस्ताको जिज्ञासासँग जोड्न तत्पर तःननि दाफा खलःका सल्लाहकार सिद्धिनारायण महर्जनका अनुसार हाल प्रचलित देवी प्याखं पुरानो लालहिरा प्याखंको बचेको भाग हो । लालहिरा प्याखं कीर्तिपुरको मौलिक खः प्याखं हो । यसमा लाल र हिरा नामक दुई मुख्य पात्रको प्रेम अनि जीवन संघर्षलाई सांगीतिक परिवेशमा देखाइन्छ ।
कीर्तिपुरमा श्रुति परम्पराबाट वर्तमानसम्म आएको लालहिराको लोककथामा केही विशेषता रहेको छ । यहाँ लालहिराको जीवनयात्रामा देवी प्याखंकी प्रमुख पात्र इन्द्रायनी देवीले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छिन् । लालहिरा दुवै पात्रको अलौकिक किसिमले जन्म हुन्छ । रहस्यमय तरिकाले पैदा भएका लाल हिरा हुर्कंदै गएपछि एकअर्काको प्रेममा पर्छन् र विवाह गर्छन् ।
पहिलो खण्डमा मुख्य पात्रको जीवनको पूर्वाद्र्ध रहेको छ । कथाको मध्य भागमा लालहिराको वियोग हुँदा इन्द्रायनीले नै वनदेवीको रूपमा दुई प्रेमीको मिलन गराउँछिन् भने अन्तिम भागमा विछोडलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने सल्लाह दिन्छिन् ।
अहिले लालहिरा प्याखं लोप भएको छ । प्राप्त जनश्रुति अनि केही इतिहासका अवशेषबाट यसलाई फेरि जीवन्त बनाउने प्रयास चलिरहेको छ । कोरोनाभाइरसको भाइरसको महामारी नहुदो हो त गएको मार्चमा ‘इकोज इन द भ्याली’को कीर्तिपुर संस्करणमा यो लोककथा पुनः मञ्चन भइरहेको हुन्थ्यो ।
संगीत, साहित्य अनि संस्कृतिको समागम
मोहनि नख:को बेला कीर्तिपुर इन्द्रायणी देवीको परम्परागत नाचमा रमाइरहेरको हुन्छ । शरदको बेलामा देवी प्याखंले कीर्तिपुरको सांस्कृतिक चेतनालाई तरंगित गरिदिन्छ । वर्तमानमा जिवन्त भएको तरंग अतीतका अनेकन प्रयासहरूको जोड हो ।
देवी प्याखंका हरेक आयामको आफ्नै विशेषता अनि इतिहास रहेको छ । यस सम्बद्ध मूल्य मान्यता मोहनि नख:का बेला सांस्कृतिक आयोजनका रुपमा मूर्त भएर आउँछ । लोककथाले स्थानीय भावनालाई समेटेर राखेको हुन्छ । यस देवी प्याखंले अप्रत्यक्ष रुपमा सम्हालेर राखेको कुरा भनेको लालहिराको लोककथा हो ।
फोल्क लोकका अध्ययनकर्ताहरुले रक्तकाली काठमाण्डौं स्थित, आशा सफु कुथिमा लालहिरासंग सम्बद्ध हस्त लिखित ग्रन्थहरु भेटेका छन् । यिनमा एक प्रतिमा तिथि मिति स्पष्ट नभए पनि राजा सुरेन्द्रको नाम उल्लेख भएबाट राणाकालमा यो कथा रचिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै देवी प्याखंसँग जोडिएर आउने अर्को महत्वपूर्ण आयाम भनेको दाफा भजन। त:ननि दाफा खल:को मूल पहिचान नै दाफा भजन हो ।
तःननि दाफा खलःको मूल पहिचान नै दाफा भजन हो । दाफा भजनमा ताल बाजाहरू खिं, ताः र बौंचा अनि फुकेर बजाउने बाजाहरू पोंगा र शंखको प्रयोग हुन्छ । यस खलःमा जति, पर्ताल, चो सहित सात थरीका तालहरू प्रयोगमा रहेको पाइन्छ ।
दाफाको विशेषता भनेको एउटै म्ये दुई वा दुईभन्दा बढी तालहरूले बनेको हुनसक्छ । एउटै म्येलाई बाँध्ने यस्तो तालहरूको समूहलाई ग्वारा भनिन्छ । देवी प्याखंको सम्बन्धमा यस्ता तीनवटा ग्वारा प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
म्येको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा संस्कृत, मैथिली, नेपालभाषा गरिकन तीन भाषाका विविध कालखण्डमा रचिएका भजनहरू यस खलःसँग सुरक्षित रहेको देखिन्छ । विविध रागहरूमा गाइने दाफाका भजनहरूमध्ये संस्कृत कवि जयदेवका रचना अनि मैथिल कवि विद्यापतिका कृतिहरूलाई पनि दाफा खलःले देवी प्याखंमा गाउने गरेको छ । त्यसलगायत नेपालभाषामा मल्लकालीन राजा सिद्धिनरसिंह मल्ल, योग नरेन्द्र मल्ल, विष्णु मल्ल, जयप्रकाश मल्लबाट भएका साहित्यिक रचनाहरू दाफाको किताबमा रहेका छन् ।
रणबहादुर शाह, राजेन्द्र शाह, सुरेन्द्र शाह र पृथ्वी शाहको नाम उल्लेख भएका दाफा भजन समेत रहेकाले शाहकालमा आएर पनि दाफा भजन रचनाको क्रम निरन्तर भएको देख्न सकिन्छ । देवी प्याखं र दाफा भजन सँगसँगै हुने भएका कारण, यसको लागि ताल अनि नृत्यको संगति हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।
देवगणको नृत्य दाफा भजनको सांगीतिक निर्देशनमा हुने गर्छ । यसर्थ प्याखंमा सामेल सम्पूर्ण संगीतज्ञ लगायत देवगणको सानो भन्दा सानो चालले पनि ठूलो अर्थ राख्दछ । दाफा खलः लगायत समुदायका सदस्यसँग भिजेको व्यक्ति मात्रै यस कार्यमा संलग्न हुन लायक कहलिएको हुन्छ ।
यसरी कीर्तिपुरमा देवी प्याखं दाफा परम्परासँग सांस्कृतिक विशेषताका रूपमा मात्रै नभई सामाजिक व्यवस्था तथा साझेदारीको परावर्तन सरह देखा पर्छ ।
एउटा युवा प्रयास
संस्कृतिको एउटा पाटो संरक्षण हो भने अर्को संवद्र्धन । पुर्खाले रचना गरेका सुन्दर कुरालाई राम्ररी बचाएर राख्नुपर्छ तर यतिमै सीमित हुनु भने हुँदैन । साहित्य र संगीतका आयाममा नवीन प्रविधि र प्रयोगलाई आत्मसात् गर्न सकिन्छ । तःननि दाफा खलःमा दुवै पाटोको प्रयास देख्न सकिन्छ ।
आखःछेंमा मुक्तिनाथ महर्जन जस्ता अघिल्ला अनुभवी पुस्ताबाट नयाँ जिज्ञासु पुस्ताले आवश्यक कुरा सिकिरहेको छ । युवाहरूको सक्रियतामा वाद्यवादन, गायन, नृत्य एवं संस्कृतिका यावत् मूर्त–अमूर्त पाटोलाई अभिलेखीकरण गर्ने कामको थालनी हुँदैछ ।
देवी प्याखंकै सन्दर्भमा, इतिहासको विविध कालखण्डमा विभिन्न कारणवश स्थगित यस नृत्यलाई गत केही वर्ष यता निरन्तर संचालनमा ल्याइएको छ । दाफाका सक्रिय सदस्यहरू दिलीपकुमार महर्जन र राजकुमार महर्जनले दुईवर्ष अघि नव देवगण टोली पनि तयार गरेका छन् । यसो गर्दा सिकाइका केही नयाँ शैली पनि अपनाइएको उनीहरुको भनाइ छ ।
नयाँ देवगणको प्रशिक्षण पूरा गरेका नयाँ पुस्ताका युवाहरूको सहभागिताबाट अघिल्ला पुस्ताले उत्साह र हौसला हासिल गरेको छ । हालसालै दाफा खलःका अध्यक्ष दिलीपकुमार महर्जनकै अगुवाइ र कीर्तिपुर नगरपालिकाको सहयोगमा तःननि टोलमा फल्चा र आखःछें जस्ता सांगीतिक पुरातात्विक संरचनाको जीर्णोद्धार र नवनिर्माण पनि गरिएको छ ।
यति हुँदाहँुदै पनि सांस्कृतिक संरक्षण र संवद्र्धन त्यति सरल भने देखिएको छैन । पुर्खाहरूले हस्तान्तरण गरेका सम्पदाको पहिचान कसरी गर्ने ? सम्पदाहरूलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? सानो समुदायको र एकल इतिहासको घेराबाट कसरी उम्कने ? नयाँ पुस्तालाई सम्पदा हस्तान्तरण कसरी गर्ने ? कस्ता मूल्य मान्यताहरू स्थापना गर्ने ? जवाफ सजिलो भने छैन ।
नेवाः सांस्कृतिक समुदायहरू बदलिंदो सामाजिक ढाँचा लगायतका संयन्त्रहरूबीच पुनर्जीवन खोज्ने होडमा छन् । यो क्रममा नयाँ सहयोगी हातहरूको सोधखोज र सो अनुसार प्रगतिशील मार्ग पहिल्याउन पनि अत्यावश्यक छ । तःननि दाफा खलः यही मार्गतर्फ लम्किरहेको छ ।
२०२० को जनवरी यता अमेरिकी दूतावासको बुक बस प्रोजेक्टको फोक लोक कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न गतिविधि समुदायसँगको साझेदारीमा भइरहेका छन् । समुदाय बाहिरका एथ्नोमुजिकोलोजी लगायत अन्य सोसल साइन्सका विद्यार्थीको प्रयासमा श्रुति परम्पराबाट प्राप्ते लालहिरा प्याखंको कथा फेरि लेखिएको छ भने दाफाका अग्रजहरूको सहकार्यमा देवी प्याखंमा प्रयोग हुने गायन र वाद्य वादनको डिजिटल रेकर्डिङ गरी तिनका बोलहरूलाई लिपिबद्ध गरिंदैछ ।
साथसाथै बन्दाबन्दीको समय सदुपयोग गर्दै पुस्तौं पुरानो दाफा समूहप्रति नयाँ पुस्ताको सचेतना बढाउन ‘घरबाटै इतिहास; तःननिका कथाहरू’ नाम दिएर एकमहीने अनलाइन कार्यशाला पनि सञ्चालन गरिएको छ ।
तःननि दाफा खलः अध्ययनकर्ताहरू आउने दिनहरूमा उक्त कथामा आधारित लोपोन्मुख नृत्यलाई पुनः मञ्चन गर्न सकिन्छ कि भन्ने सम्भावना केलाउँदै छन् । पुराना लोककथालाई नयाँ प्रविधि अनि परिश्रमले सिंचन गर्दा यसमा वर्तमान पुस्ताको परिश्रम मिसिन्छ नै, भविष्यका लागि पनि लोक साहित्यमा पुर्खाको नासो सुरक्षित हुनपुग्छ । कथाले आफ्नो परिवेशलाई सम्हालेको हुन्छ । श्रोता समक्ष पुग्दा यो नयाँ कल्पना अनि भावनालाई प्रस्फुटन पनि हुनेछ ।
लालहिराको कथा अनि यसबाट निःसृत देवी प्याखंले कीर्तिपुरको लोक आख्यानलाई आफूमा अँगालेर हामीसमक्ष ल्याएको छ । लालहिरा प्याखं वर्तमानमा पुनर्जीवित हुँदा अवश्य पनि यो संस्कृतिको अनुरागमा मात्र सीमित हुने छैन; यसबाट लोककथा अझ विस्तृतमा लोक साहित्य र संगीतको विधाको आवश्यकताको पुष्टि पनि गर्नेछ । लालहिरा प्याखं एब महिला र पुरुषको प्रेमप्रतिको संघर्ष हो । अझ रमाइलो कुरा यहाँ इन्द्रायनी देवी पनि प्रेमको पक्षमा कहिले आदर्शवादी भएर कहिले यथार्थवादी भएर प्रस्तुत भएको देख्न सकिन्छ ।
लोकको सम्पदा कसरी सिंचन गर्ने ? सम्पदा र समुदायको इतिहासलगायत आस्थामा घात नहुने प्रकारले विश्वव्यापीकरणको परिवेशमा कसरी उत्रने ? संस्कृतिप्रेमी लगायत उक्त क्षेत्रमा लागेकाहरूका लागि यी कुरा अवसर र चुनौती दुवै बनेका छन् । लोक संस्कृतिको आयाम संवेदनशील विषय हो, यसको अभ्यास र अभिव्यक्तिले समुदायको मन नदुखाओस्, अवास्तविक पूर्वाग्रह विकास नगरोस् भन्नेमा भने सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यही सचेतनाका साथ तःननि दाफा खलः नयाँ साझेदारहरूका साथ नयाँ आधारशिला खडा गर्दैछ जुन निश्चित थर, जाति वा लिङ्गमा सीमित हुने छैन ।
मोहनी नखः वर्षेनि आउँछ, शारदीय मौसममा हाम्रो मानस पटल भिजाउँछ । संस्कृति सशक्त भएर अभिव्यक्त हुन्छ; साहित्य, संगीत, सौन्दर्य जस्ता जीवनका आयाम रसाउँछ । प्राचीन वस्तीका चोक, गल्लीहरूमा कथा अनि किंवदन्ती ज्यूँदो भएर आउँछ ।
कीर्तिपुरको देवी प्याखं यस्तै मानवीय संवेदनालाई झंकृत बनाउने सांस्कृतिक आयाम हो । कथा यसको अन्तर्य हो; अनि नृत्य अनि संगीत यसको बाह्य अभिव्यक्ति । प्यंगः थाँको करुणामयको प्रेमिकादेखि जिब्रो नभएका बाघ भैरवसम्म यहाँ लोककथाको पात्र संस्कृतिमा जीवन्त भएको पाइन्छ ।
देवी प्याखं जति प्राचीन छ; त्योभन्दा महत्वपूर्ण यसको वर्तमान अनि भविष्य छ। वर्तमानमा यसको प्रयोजन, भविष्यका लागि जोगाउने तत्व हामीले नै दिने अर्थ, प्रयोग गर्ने बिम्ब र प्रयासमा निर्भर हुन्छ ।
यस्ता बिम्ब प्रतिबिम्ब, श्रव्य दृश्यका अवयव अनि पृष्ठभूमि कीर्तिपुर स्वयं छ । यस्तो सांस्कृतिक सम्पदा जहाँ कुनै टिकट काटेर आउनुपर्दैन, अग्रिम बुकिंग गर्नु पर्दैन । तःननिको फल्चा, चैत्य, चोक यसको मञ्च भए, उत्सुक आँखा यसको दर्शक । अघि भनिए जस्तै युवा पुस्ताको लागि यहाँ चुनौती पनि छ र अवसर पनि । बनाउन सक्यो भने हेर्ने मुहार मुस्काउने सम्पदा बनाउन सकिन्छ, प्रशंसा पोखिने आयाम सिर्जना गर्न सकिन्छ, निराश हृदयमा पनि आशा जगाउने प्याखंको निर्माण हुनसक्छ । अहिले तःननिको देवी प्याखं मोहनी नखःको बेला कीर्तिपुरको पहिचान भएर उदाइरहेको छ ।
–बौद्ध दर्शनका विद्यार्थी नेशन श्रेष्ठ हाल फोक लोक कार्यक्रम अन्तर्गत श्रुति परम्पराबाट उपलब्ध लालहिरा प्याखं पुनर्लेखनमा सहभागी छन् ।
–एथ्नोम्युजिकोलोजी विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरिरहेकी पुष्पा पलाञ्चोके फोक लोक कार्यक्रमको कार्यक्रम संयोजक हुन् ।